RALHRANG NIH TUZING ZONG AH HRIAMNAM NGAN IN MINDAT AN KAH HNA – The Chinlung Post
RALHRANG NIH TUZING ZONG AH HRIAMNAM NGAN IN MINDAT AN KAH HNA
May 15, 2021 admin Chin 0
Mindat ah SAC ralkap Helicopter4a luut than, hriamnaam ngan in an kah hna.May 15, 8:27 am ah Helicopter4in battalion 274 hmun ah ralkap thazaang le hriamnaam an chap than. Tuzing ah hriamnaam ngan in voi 15 renglo an kah hna. SAC ralkap cheukhat cu Na-Ta-La sianginn le meng4hlat Phungki sianginn zong ah hmunhma an la, tiah MDT nihathanh.
15.5.21 (8:27am) စကစတပ်က ရဟတ်ယဥ် (၄) စီး ၂၇၄ တပ်ရင်းအတွင်းသို့ စစ်ကူများ၊ လက်နက်များ ဒီနေ့မနက် ချပေးသွားပါတယ်။ စကစတပ်က ယနေ့မနက်ပိုင်းမှာတင် မြို့ထဲသို့ ၁၅ ကြိမ်ထက်မနည်း လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ အနောက် နတလကျောင်းမှာလည်း စကစတပ်တွေ နေရာယူထားတယ် လို့သိရပါတယ်။ စကစတပ်သားတချို့ အနောက် ၄မိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဘက်ကို တက်သွားသည်ဟု သိရသည်။ MDTပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး (သတင်းအဖွဲ့)
Relchih:CDF-Hakha nih Palik Bawi3le Dalan Pakhat an Tlaih Hna. Hakha peng chung ah CDF-Hakha nih SAC ralkap misa (Traffic) palik bawi3le Dalan pakhat an tlaih hna, tiah CDF nih thawngpang an chuah. Tlaihmi minung4hna cu: (1) U Soe Lwin (ရဲမှူး). (2) U Soe Win Tann (ဒုရဲမှူး).(3) Pu Sung Ki (ဒုရဲအုပ်).
Palinak. U Sai Tun (Dalan Tumtlang) hi an si hna.Hakha ah SAC nih an tlaihmi hna an zapi in May 15, zinglei sml. 8:00 hlan ah nan thlah dih hna lo ahcunacunglei minung4i an nunhimnak kong ttuanvo kan la lo, tiah CDF nih thawng an thanh.CDF-Hakha မှ ရဲ (၃)ဦးနှင့် ဒလန်တစ်ဦးဖမ်းဆီးပြီး စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားသည့် ပြည်သူအားလုံးလွှတ်ပေးရန် ကမ်းလှမ်း
CDF-Hakha မှ ဟားခါးစစ်ကောင်စီ၏ လက်ပါးစေ ၄ဦးကို ဟားခါးမြို့နယ် အနီးတနေရာတွင် ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားသည့် ပြည်သူအားလုံးမလွှတ်ပေးပါက ၎င်းတို့အတွက် အသက်အာမ မခံကြောင်း ထုတ်ပြန်သည်။ CDF-Hakha မှ ဖမ်းဆီးထားသူများမှာ ၁။ ဦးစိုးလွင် – ရဲမှူး၊ ပြည်နယ် ယာဥ်ထိန်း (လ ၄၇၀၆) – အပတ်စဥ် ၂၃. ၂။ ဦးစိုးဝင်းသန်း – ဒုရဲမှူး ပြည်နယ်ယာဥ်ထိန်း (လ ၇၃၁၃).၃။ ဦးဆုန်းကီး – ဒုရဲအုပ် ပြည်နယ်ယာဥ်ထိန်း (လ ၂၃၀၈၄). ၄။ ဦးစိုင်းထွန်း – ဒလန်အကြီးစား. ဖမ်းဆီးခံ ဟားခါးပြည်သူများ တစ်ယောက်မကျန် မေလ(၁၅)ရက် နံနက်ပိုင်း ၈နာရီမတိုင်ခင် ​​ခြွင်းချက်မရှိ ​လွှတ်ပေးရန် CDF-Hakha မှ ကမ်းလှမ်းသည်။
EVAN TIAL LIAN THANG LEHNAK A TUAH CANG, NA BIACHIM KA HNAK A KA DOH TUK
DR. RUAL UK: TUTAN ZONGAH TIAL LIAN THANG HI A PALH CIKCEK KO